Buy Dell XPS11 i5 (ssd 128gb) Touch screen with 360° flit (650,000Ks) in လမ်းမတော် on ipivi.com
Dell XPS11 i5 (ssd 128gb) Touch screen with 360° flit
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 89ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 175 (+ 1 )
ပေါ့ပါးသေးသွယ်ပြီးသွားလေရာသယ်ယူရအဆင်ပြေပါတယ်။ ကမ္ဘာအပါးလွှာဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့model လေးပါ။ ဝယ်ထားတာမကြာသေးပါဘူး ။ မသုံးဖြစ်လို့ပြန်ရောင်းတာပါ။စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်သွယ်ပါ။
Good conditon . 99% new
Touch screen, window 10.
Core i5 , ssd 128gb (can upgrade to 256), ram4gb
Screensize - 11.6 in
with original charger.
Hack Disk BG 500
ESPON L220 Print,Copy,Scan,4 Col...
acer i3 2nd Gen Laptop
acer Pentium Laptop
အမည်: Dell XPS11 i5 (ssd 128gb) Touch screen with 360° flit